China Enameled Cast vy mavo / mainty tekinika tekinika sy mpamokatra | Forrest
Tavoahangy sy vilany ao anaty rano
enamel ao anatiny ary hosodoko ivelany
Toeram-pisotro fisotro napetraka
Ketera maitso / teko mainty vy
Manadio ny vy vy vita amin'ny vy
U Avelao hangatsiaka ny lakozia alohan'ny hanasana.
U Sasao amin'ny rano misy savony mafana ny tanana mba hitehirizana ny fisehoan'ny lakozia tany am-boalohany.
U Atsaharo avy hatrany ny lakozia.
U Aza mampiasa afa-tsy plastika na padon fikosehana nylon mba hanimbana ny fonosana.
U Ho an'ny tasy maharitra, alemana ao anaty lakozia mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 ora
U Mba hanesorana izay namboarina tamin'ny sisa tavela amin'ny sakafo dia andrahoy rano mifangaro 1 kaopy sy soda 2 sotro fihinana ao anaty vata fandrahoana.
U Aza miakatra ambony ambany ny sarony eo ambonin'ny vilany, midika izany fa tsy afaka mifampikasoka mivantana ny firakotra ny enamel, izay hiteraka korontana eny ambonin'ny tany.
A: Matetika 500 MOQ ny MOQ anay. Fa ekenay ny habetsany ambany kokoa noho ny kaomandin'ny fitsarana anao. Aza misalasala milaza aminay hoe firy ny singa ilainao, hikajiana ny vidiny mifanaraka amin'izany izahay, manantena fa afaka mametraka baiko lehibe ianao aorian'ny fizahana ny kalitaon'ny vokatray ary hahafantatra ny serivisinay.
A: Azo antoka. Matetika izahay manome santionany mivoaka maimaim-poana. Saingy santionany kely amin'ny sarany ho an'ny famolavolana fanao. Ny sarany santionany dia azo averina rehefa tafakatra hatramin'ny habetsahan'ny entana. Matetika izahay dia mandefa santionany amin'ny alàlan'ny FEDEX, UPS, TNT na DHL. Raha manana kaonty mpitatitra ianao dia tsara ny mandefa azy miaraka amin'ny kaontinao, raha tsy izany dia afaka mandoa ny sarany entana amin'ny papa izahay, halefanay miaraka amin'ny kaontinay. Mila 2-4 andro eo vao mahatratra.
F: Mandra-pahoviana ny santionany mitarika fotoana?
A: Ho an'ireo santionany efa misy dia maharitra 2-3 andro. Malalaka izy ireo. Raha mila ny volanao manokana ianao dia mila 5-7 andro, miankina aminao ny famolavolana raha mila efijery fanontana vaovao izy ireo, sns.
F: Mandra-pahoviana ny fotoana famokarana?
A: maharitra 30 andro ny MOQ. Manana fahaiza-manao famokarana lehibe izahay, izay afaka miantoka ny fotoana fandefasana haingana na dia be aza.
F: Inona ny endrik'ilay rakitra ilainao raha mila ny voloko manokana aho?
A: Manana ny mpamorona azy ao an-trano izahay. Azonao atao ny manome JPG, AI, cdr na PDF, sns. Hanao sary 3D ho an'ny bobongolo na ny efijery fanontana ho an'ny fanamafisana farany miorina amin'ny teknika ianao.
F: Firy ny loko azo?
A: Mampifanaraka loko amin'ny Pantone Matching System izahay. Azonao atao fotsiny ny milaza aminay ny kaody loko Pantone ilainao. Hifanaraka amin'ny loko izahay. Na hanolotra loko malaza sasany aminao izahay.
Q: Karazan-taratasy inona no anananao?
A: Ny fe-potoana fandoavam-bola mahazatra anay dia ny deposite TT 30% aorian'ny sonia ny baiko ary ny 70% manohitra ny kopian'ny B / L. Manaiky LC koa izahay eo imasony.
1) Fonosana teapotika vy:
-Amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra, toa DHL, UPS, FEDEX,sns. varavarana doo io, matetika 3-4days tonga.
-Amin'ny rivotra mankany amin'ny seranan-tsambo, matetika 5-7days tonga.
-Amin'ny ranomasina mankany amin'ny seranan-dranomasina, uaually 15-30days tonga.
Raha urgrnt be ny fotoana andefasana anao, dia manolo-kevitra anao izahay hisafidy mpampita hafatra na amin'ny rivotra.
Raha tsy izany dia manoro hevitra anao izahay amin'ny morontsiraka, dia mora vidy tokoa.
Serivisy an-tserasera 1.24 ora.
2. Serivisy mialoha sy fivarotana tsara indrindra.
3. 50 andro aorian'ny nahazoana ny fandefasana vola.
4. Hisafidy ny orinasan-tsambo miaraka amin'ny serivisy tsara sy vidiny ambany ho anao izahay.
Previous: Teapot vy vy enamel Japoney 0.8L
Manaraka: 0.3L Eurofins ambongadiny dia nankatoavina ny enamel tetsubin vy fanamoriana vilany
Fitaovana fandrahoana enamel vy
FDA, LFGB, Eurofins dia nanaiky ny ellipse Frying pan w ...
Manary lasitra famonoana mofo vita amin'ny mofo vita amin'ny vy
Kettle vy vita amin'ny vy japoney
Fonenana an-dakozia ao an-trano 25cm manodidina ny vy vy ...